မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုက နိုင်ငံတကာကို ဘယ်လောက် စိုးရိမ်မှု ဖြစ်စေသလဲ - ข่าวสด
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုက နိုင်ငံတကာက...
18 ก.ย. 2564 - 01:00 น.
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခရုဇ်ဒုံးကျည်သစ်
ဒီသီတင်းပတ် အစောပိုင်းက မြောက်ကိုရီးယားက တာဝေးပစ်ခရုဇ် ဒုံးကျည်ကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဒုံးကျည်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံနေရာ တော်တော်များများအထိ ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခရုဇ် ဒုံးကျည်တွေဟာ သမားရိုးကျ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေလို မဟုတ်ဘဲ ပျံသန်းနေစဉ်မှာ လိုသလို အလှည့်အပြောင်း လုပ်နိုင်ပြီး မထင်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေကို ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားဟာ နျူကလီးယား လက်နက်တွေ ပစ်လွှတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ခေတ်မီတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးစုံ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကပ်ရောဂါ၊ သဘာဝဘေးဆိုးတွေနဲ့ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း တွေကြောင့်လည်း မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရေး ရည်မှန်းချက် လျော့ကျသွားဖို့ မရှိဘူး ဆိုတာ ပြနေပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး စမ်းသပ်အောင်မြင်မှုကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားက ဘာကြောင့် စမ်းသပ်တာလဲ၊ ဘယ်လောက်ခေတ်မီသလဲ နောက်ပြီး သူတို့ ဘာတွေကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေသလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ထွက်လာနေပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နွေဦးရာသီက စပြီးသူတို့ရဲ့ နျူကလီးယား စွမ်းရည်ကို အရည်အချင်းရော အရေအတွက်ပါ တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ လအတွင်းက အရင် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ဂျေ ထရမ့်နဲ့ ဟနွိုင်းမြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရေးနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတဲ့ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ တွေ အတွက် ဆက်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြောက်ကိုရီးယားဟာ ပြည်တွင်းမှာ အစားအစာ မလုံလောက်မှုနဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုတွေကြောင့် ရုန်းကန်နေရတဲ့ကြားမှာ ဘာလို့ ဒီအတွက် ဆက်ပြီး လုပ်နေတာပါလဲ။
အဖြေကတော့ မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ဒီလို စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာအတွက် ပိုအရှိန်အဟုန်ကောင်းလာစေသလို စိတ်ဓာတ် အင်အားလည်း တက်လာခဲ့ပါတယ်။
တခါ မြောက်ကိုရီးယား အနေနဲ့ ဒီလို ခရုဇ်ဒုံးကျည်လို စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ လက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်လာခြင်းကြောင့် သူနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုလက်နက်သစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ပါ စဥ်းစာလာရပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ရှိပြီးသား အစီအမံတွေကို ရှုတ်ထွေးလာစေပါတယ်။
ကင်ဂျုံအွန်း မရှိရင် မြောက်ကိုရီးယားကို ဘယ်သူ ဦးဆောင်မလဲ
IAEA ရဲ့ စုံစမ်းရေးမှူးတွေကို နှင်ထုတ်ပြီးနောက် နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရေး မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ကြိုးပမ်း
မြောက်ကိုရီးယားက မကြာခင်က စမ်းသပ်တဲ့ ခရုဇ်ဒုံးကျည်ဟာ ဆိုရင် အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀၊ မိုင်နဲ့ ဆိုရင် မိုင် ၉၃၀ အထိကို အချိန်အားဖြင့် ၂ နာရီစွန်းစွန်းနဲ့ အရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်တွေဆိုရင်တော့ ဒီလောက် အကွာအဝေးကို မိနစ်ပိုင်းနဲ့ ရောက်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခရုဇ် ဒုံးကျည်ဟာ ဘယ်က ပစ်လွှတ်မယ်ဆိုတာ သိဖို့ ခက်သလို ကာကွယ်ဖို့လည်း ခက်တာကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားက ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေကို မျက်စိကျနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မစ္စတာ ကင်မ်ဟာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ကျဆင်းနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ နျူကလီးယား စွမ်းရည်မြင့်မားရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို မရအရ အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီစမ်းသပ်မှုက ထင်ဟပ်ပြနေပြန်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်တိုင်က အခြေခံကျတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်မလာရင်၊ အမေရိကန်ဘက်က ထိရောက်တဲ့ သံတမန်ရေးနဲ့ မညှိနှိုင်းနိုင်ရင် ပြုံးယမ်းဟာ သူတို့ရဲ့ နျူကလီးယား စွမ်းရည် မြင့်မားရေးတွေကို ဆက်လုပ်သွားနေဦးမယ့် သဘောရှိပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက အခုလို အချိန်အခါမှာ ဘာကြောင့် ဒီလို လက်နက် စမ်းသပ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာကလည်း တွေးစရာပါ။
သူတို့ စမ်းသပ်မှုဟာ ဘိုင်ဒန် အစိုးရရဲ့ မူဝါဒနဲ့ရော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် တိုက်ခိုက်မှု နှစ် ၂၀ ပြည့်ချိန်နဲ့ရော မဆိုင်ဘူးလို့ ဆိုနေပေမယ့် ဒီလက်နက် စနစ်ကို ချပြလိုက်ချိန်ကတော့ သွားတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အစိုးရိမ်ဆုံး ကိစ္စကတော့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာက ဒီနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဒုံးကျည်တွေကို မဟာဗျူဟာမြောက် လက်နက်တွေလို့ သုံးနှုန်းထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သုံးနှုန်းလာပြီဆိုရင် များသောအားဖြင့်က မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒုံးကျည်မှာ နျူကလီးယား ထိပ်ဖူးတပ်ဆင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပြီ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က မြောက်ကိုရီးယား ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ခရုဇ်ဒုံးကျည်စနစ်တွေမှာ ဒီလို နျူကလီးယား ထိပ်ဖူးတပ်ဆင် ပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာတာဟာလည်း ဆန်းတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ အတွင်းမှာပဲ မစ္စတာ ကင်မ်က ဒီလို လက်နက် စနစ်မျိုး တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူက အနာဂတ်မှာ နျူကလီးယား လက်နက်တွေ ပစ်လွှတ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဒုံးကျည်စနစ် ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်း သွယ်ဝိုက်ပြီး ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒုံးကျည်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေ သိထားပြီလဲ
မြောက်ကိုရီးယားက မကြာခင်က စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ခရုဇ် ဒုံးကျည်မျိုးတွေနဲ့ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေမှာ ကွာခြားချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီကလည်း မြောက်ကိုရီးယားကို ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်တွေ မစမ်းသပ်ဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရုဇ် ဒုံးကျည်တွေကို မပိတ်ပင်ထားပါဘူး။
ဒါကလည်း ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေက ဖျက်စွမ်းရည် ပိုများတဲ့ ထိပ်ဖူးမျိုးတွေ ပိုသယ်ယူနိုင်ကာ ပိုဝေးတဲ့ အကွာအဝေးကို ပိုမြန်ဆန်စွာ ပျံသန်း ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဘာကြောင့် ဒုံးကျည်တွေ ဆက်စမ်းသပ်နေသလဲ
ပဲထိန်း ဒုံးကျည်တွေဟာ မြေပြင်က ပစ်မှတ်နဲ့ နီးလာတဲ့ နောက်ဆုံး အဆင့်မျိုးမှာ ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ခရုဇ် ဒုံးကျည်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ခရီးလမ်းတလျှောက် လိုအပ်သလို တက်ဆင်း ကွေ့ဝိုက် ပျံသန်း နိုင်စွမ်း ရှိသလို မထင်မှတ်တဲ့ နေရာတွေကပါ ပစ်လွှတ် တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ခရုဇ် ဒုံးကျည်ဟာ သိပ်မြင့်မြင့်ကနေ ပျံသန်းလာတာမျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက် မြေပြင်အခြေစိုက် ရေဒါ စနစ်တွေ အနေနဲ့ ထောက်လှမ်းဖို့ ခက်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်နဲ့ နီးလာမှသာ သိနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပြီး ပျံသန်းလာတဲ့ လမ်းကြောင်းကလည်း နိမ့်လွန်းနေတာကြောင့် လမ်းက ဖြတ်ပြီး ဖျက်ဆီး ပစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းက တော်တော် ခက်ခဲသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြောက်ကိုရီးယား အတွက် ခရုဇ် နည်းပညာဟာ အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ဟာ ဆိုဗီယက်ခေတ်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောဖျက် ခရုဇ် ဒုံးကျည်တွေကို စမ်းသပ်နေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံး စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ခရုဇ် ဒုံးကျည်တွေကတော့ အရင်စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒုံးကျည်တွေထက် ပိုပြီးထိရောက်မှု ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေထဲက တစိတ်တပိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုမြူ အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြုံးယမ်းဟာ ယုံဗြောင်းက သူတို့ရဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ဂရပ်ဖိုက်ခဲ နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ပြန်လည် လည်ပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် နျူကလီးယား လက်နက်တွေမှာ သုံးတဲ့ ပလူတိုနီယမ် တွေ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်နေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခရုဇ် ဒုံးကျည်တွေ စမ်းသပ်အပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေကို စမ်းသပ်တာကို ကြည့်ရင် မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည်တွေကို ပိုမို တိုးတက်ဖို့ တီထွင် စမ်းသပ်မှုတွေ ပြန်လည် စတင်နေပြီဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။
အန်ကစ် ပန်ဒါဟာ Carnegie Endowment for International Peace က နျူကလီးယားမူဝါဒဆိုင်ရာအစီအစဉ်က စတန်တန် အဆင့်မြင့်ပညာရှင် ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုက နိုင်ငံတကာကို ဘယ်လောက် စိုးရိမ်မှု ဖြစ်စေသလဲ